Mamiriro ekunze mazuva gumi nemana, masvondo maviri mamiriro ekunze pane yako iPhone | IPhone nhau
Mamiriro ekunze mazuva gumi nemana, vhiki mbiri yeruzivo rwemamiriro ekunze muhomwe yako
Pakati pekushandisa kwakawanda muApp Store, pane zvishoma zvakanaka zvinotitaurira kuti mamiriro ekunze achaitei mumaawa anotevera. Asi ko kana tichida kuziva kuti mamiriro ekunze achange akaita sei svondo rinouya? Chizvarwa chekuIOS application chinongotipa ruzivo rwakadzama rwanhasi nanhasi, nepo ichitipa ruzivo rwushoma (tembiricha uye kana kuchanaya kana kwete) kwemazuva gumi, saka kana tichida ruzivo rwakadzama isu tichafanira kutsvaga imwe nzira. Iyo yakanaka ndeye Mamiriro ekunze mazuva gumi nemana, kunyorera kunotipa ruzivo nebvudzi nemasaini kwevhiki mbiri.
Chii chingataurwa nezvekushanda kwekushandisa kwemamiriro ekunze? Zvakanaka, kana yakagadzira zvakanaka, uye iwe uchanditendera kuti ndiratidze, inofanirwa kuve yakapusa pane mashandiro eacacifier. Iyi ndiyo El tiempo mazuva gumi nemana: yakapusa, inonzwisisika mufananidzo uye ichipa ruzivo rwakawanda. Kutanga, sekuvimbisa kwainoita zita, inotipa mavhiki maviri ekufungidzira kwemamiriro ekunze, izvo zvinotibvumidza isu kuronga chero rwendo kana chiitiko. Asi zvakare ine chimwe chinhu chandakagara ndichifarira: mamapu.
1 Mamiriro ekunze mazuva gumi nemana, ruzivo rwakawanda mukushandisa kuri nyore
2 Iine widget uye inoenderana nePad uye Apple Tarisa
Mamiriro ekunze mazuva gumi nemana, ruzivo rwakawanda mukushandisa kuri nyore
Asi chii izvi nezveMepu? Kana tikabata pamitsara mitatu yesarudzo, pazasi tichaona iyo Mepu sarudzo. Kubva pamamepu aya tinogona kuona Spain, Europe kana Canary Islands uye tinofambisa chinotsvedza kuti tione zvichaitika pane imwe nguva. Uye ichi chimwe chinhu chatinogona kuita kutarisa tembiricha, mvura, mhepo, kusviba, mvura uye makore, mvura uye kumanikidza kana kumanikidza nemhepo.
Kune rimwe divi, isu zvakare tine radars, iyo inotiratidza ruzivo kubva kuHurumende Meteorological Agency, uye ma satellite, kubva kwatinozoona ruzivo kubva kumasetelliti akasiyana akadai seMETEOSAT neGoES. Sokunge izvo zvaive zvisina kukwana, Nguva mazuva gumi nemana anotitaridzawo mamwe marudzi eruzivo, senge yambiro. Panguva yekunyora mitsara iyi zvese zviri pachena, saka hazviratidze chero chenjedzo, asi kana paine njodzi, senge yakawanda mvura, chando, mhepo, ... tinogona kuwana kubva kuAverts chikamu che kunyorera.
Tatsanangura zvese zviri pamusoro, isu tinofanirwa zvakare kutaura nezve iwo mazuva gumi nemana ari kutaurwa nezvechikumbiro. Isu hatisi kutaura nezve kutitaurira kuti kuchanaya kana kuchanaya, kure nazvo, mazuva gumi nemana nguva inotipa ruzivo rwakadzama senge tembiricha, mhepo, hunyoro, mwero wechando, mhute, kusviba uye kupisa kwemanzwiro. Uye chinhu chakanakisa ndechekuti haitipe ruzivo rwehuwandu nezvezuva, asi kuti rinotipa dhata rehusiku uye masikati panguva dzakasiyana. Pakati pemazuva maviri ekutanga vachange vari paawa, kubva pazuva rechitatu kusvika pazuva rechinomwe vanenge vafungidzira maawa matatu ega ega uye kubva pachisere kusvika pagumi nemana, maawa gumi nemaviri ese.
Iine widget uye inoenderana nePad uye Apple Tarisa
Asi iyo El Tiempo mazuva gumi nemana app ine zvimwe zvakawanda zvekupa vashandisi veIOS. Kunze kwekuve inowanikwa mumitauro inopfuura makumi matatu zvakasiyana uye inogona kutorwa pasi kubva kunopfuura nyika makumi mashanu, timu yakagadzira iyo app yave ichitarisira kupa yakateedzana yezvinhu zvinonyanya kubatsira.
Yekutanga ndeye widget yatinogona kuisa munzvimbo yekuzivisa ye iPhone yedu uye nekudaro kukwanisa kuona mamiriro ekunze nekukurumidza.
Chimwe chiitiko chinofarirwa nevaridzi veApple Watch ndeichi tarisa kuenderana kubva kukambani yeapuro. Kana iwe uchida kutarisa iyo nguva yakananga kubva ku smartwatch uye pasina kutora iyo iPhone muhomwe yako, iwe unogona zvakare kuzviita. Uye kana iwe uine iyo iPad, iyo app ndeyepasirose saka iwe unogona zvakare kunakidzwa nayo pane yako Apple piritsi.
Iko kushanda sei vakasununguka, pandakaziva nezvekuvapo kwayo ndakaiyedza uye ndinofunga yakakosha. Iwe unogona kuita zvakafanana, nekuti hapana chaunorasikirwa, uye wobva wataura pane zvaunofunga nezveapp iri.
Mamiriro ekunze Mazuva gumi nemana - Kuratidzwavakasununguka
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » IPhone maapplication » Mamiriro ekunze mazuva gumi nemana, vhiki mbiri yeruzivo rwemamiriro ekunze muhomwe yako
Ndatenda neruzivo; zvisinei kungofungidzira kwemamiriro ekunze mukati memazuva mashanu kana mashoma ndiwo akavimbika. Mumazuva gumi nemana mamiriro ekunze anogona kuchinja zvakanyanya.
Imwe yemaitiro aya ndeye TiempoEnVivo iyo zvakare yemahara, kunyangwe iine sarudzo yekubhadhara, uye iine widget uye haina kushata zvachose
Iyo imwe imwe App sevamwe vakawanda.
Apple inongotaura mazuva maviri nekuti ndicho chinhu "chakavimbika" mune mamiriro ekunze, hazvigoneke kuti basa remamiriro ekunze rinogona kukuudza zvichaitika kumamiriro ekunze mumazuva mashanu, matanhatu, kana gumi nemana ...
Ndine urombo asi kuita zvirongwa zvako zvekubuda neine fungidziro yakadai zvakafanana nekutamba roulette!
Kwaziso kubva kuArgentina meteorologist
PS: iyo chete App iyo yakakodzera iyo iri. NZIRA DZENYAYA ine anopfuura makumi masere nemakumi masere emabhesu emunhu kuwedzera kune iwo epamutemo. Zviedze.
NZIRA DZENYAYA *
Pane nzira yekuona tembiricha mumamiriro ekunze undergrund mumadhigirii
Chokwadi Danieri, iwe une mbiri dzakasarudzika sarudzo semadhigiri C kana F muzvirongwa, zvakare iri muchiSpanish. Kwaziwai!
Mitambo mitsva yevhiki paApp Store: Mr Crab 2, Vhura Tap Tennis uye zvimwe zvakawanda
BitTorrent inozivisa BitTorrent Live, P2P kutepfenyura terevhizheni